TTSweet: စင်္ကာပူ မြန်မာသံရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မေးချင်နေသူများအတွက် (၃)
Posted by T T Sweet at 11:06 AM
စုချစ် October 18, 2009 at 1:51 PM
လဲတဲ့ အချိန်ကနေစလို့ သက်တမ်း ၃နှစ်ရပါတယ်။
အရင်ကလို အကြာကြီးမစောင့်ရတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ မြန်မာပြည်ကို အရင်ကလို ပြန်မပို့ဘူးတော့ဘူးနဲ့တူတယ်။
စာရွက်စာတမ်းနဲ့ တင်ပြီး ၁ပတ်အကြာမှာ စာအုပ်အသစ် ပြန်ရပါတယ်။
shan October 18, 2009 at 1:54 PM
Not that easy. If you go there you will see. I don't want to explain about it.
စုချစ် October 18, 2009 at 4:49 PM
ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ ချိုဂျီးရေ...
နာ့စာအုပ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ သွားလဲထားတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြတာ...
အခွန်၂နှစ်စာ နဲ့ စာအုပ် အသစ်လဲခ -ပေါင်း စလုံး ၃၀၀၀ကျော်တော့ နှမျောတသာ ၃ကြိမ်ရွတ်ပြီး ပေးလိုက်ရတာပေါ့... ရွှတ်... ဘတ်...
လျှောက်တဲ့နေ့က နာ့ညီမက်ို သူကျောင်းသွားတဲ့ အချိန် မနက်ပိုင်း ၉နာရီလောက် တုံကင်ဝင်ယူခိုင်းလိုက်တယ်။
နံပါတ် ၆၇ရတယ်။ နာက နေ့လည် ၂နာရီ၁၅ရောက်တယ်။ ၄နာရီမှာ အားလုံးပြီးတယ်။
နောက်တပတ် စာအုပ်ရပြီလားဖုန်းဆက်မေးတော့ ရပြီဆိုလို့ နေ့လည်ပိုင်းပဲ သွားယူတယ်။ စာအုပ်ယူတာ တုံကင်ယူစရာမလိုဘူးဆိုလို့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲရောက်တယ်။ ၃-၃၀မှာ ရတယ်...။
အဲသာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လက အခြေအနေပဲ....
T T Sweet October 18, 2009 at 5:29 PM
up date လုပ်ပေးတဲ့ သယ်ရင်းကြီး ကြီးတော်စုချစ် ကျေးဇူးပဲအေ။
တခြားသူများလဲ လောလောလတ်လတ် အတွေ့အကြုံလေးတွေ မတူတာလေးတွေရှိရင် ကွန့်မန့်မှာ ရေးသွားနိူင်ပါတယ်။ update သတင်းလေးတွေ သိရတာပေါ့။
JuneOne October 18, 2009 at 9:29 PM
ကလေး CI က အခု ၃၀၀ဖြစ်သွားပါပြီ။
♣♣♣အိမ်မက်ချိူ♣♣♣ October 19, 2009 at 8:36 PM
မှီခိုpassport နဲ့ ရိုးရိုး passport ဘာကွာလဲ.....
T T Sweet October 19, 2009 at 11:48 PM
ဒါပေမဲ့ Endorsement, Amendments and observation စာမျက်နှာမှာ အတွင်းဝန်ကနေ ဒီပါစ်ပို့ပိုင်ရှင်ရဲ့ status က့မှီခို ဖြစ်ပါတယ်လို့ မှတ်ချက်ရေးပေးထားပါတယ်။
Employment ကပြောင်းရင်လဲ ဘယ်နေ့ကစလို့ Employment status ကနေ dependent status ကို ပြောင်းထားပါကြောင်း မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ်။
♣♣♣အိမ်မက်ချိူ♣♣♣ October 20, 2009 at 6:56 PM